Upper Mustang Photography Tour Nepal
वरिपरि पहाडले घेरिएको सुन्दर बस्ती मार्फाको विशेषतामा हामिहरू मातिन थालि सकेका थियाै, चौडा छत भएका गुजमुज्ज घरहरूले हाम्राे छाति भित्रकाे मनलाइ पनि गिज्जाउन थालिसकेकाे थियाे, मररुभूमि जस्तै पाखाको बीचमा रहेको बस्तीलाई नियालि रहदा अाँखाहरू कहि न कहि गएर टाेलाइरहेकाे थियाे, स्याउको घना बगैंचाले सजाएको याे मार्फा गाउँकाे हावाले हाम्राे गालाहरू पनि स्याउझै गुलावी बनाइरहेकाे थियाे। यस गाउँको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा सम्तेन छोलिङ गुम्बाले याे गाउँलाइ निक्कै मनमाेहक मात्र बनाएकाे रैनछ यस सम्तेन छोलिङ गुम्बा त ! मार्फावासीको आस्थाको धरोहर नै पाे रैछ ! पुराना एकअापसमा टाँसिएका सेता रंगका घरहरूले एउटा छुट्टै परिचय दिइरहेकाे थियाे हामिहरूलाइ । यहाँको स्याउबाट उत्पादित ‘मार्फा’ ब्राण्डको ब्राण्डी र वाइन चाख्ने इच्छा म मा जागा भएकाे थियाे तर साथिहरूलाइ भन्न चै सकिरहेकाे थिइन मैले । झण्डै ५ बजे हामि नाङ्गाे पहाडकाे वस्ति छुसाङ्ग पुग्याै हृदयलाइ नङ्गाउदै ।